Imota yesidumbu sikaMugabe.
Isidumbu sowayenguMongameli welizwe uMnu. Robert Mugabe sizasiwa enkundleni yeRufaro Stadium eHarare namuhla ukuze uzulu ayemvalelisa besesihanjiswa emzini wakhe koZvimba ntambama lapho esizalala khona.
Isikhulumeli somndeni wakoMugabe uMnu Leo Mugabe utshele intathelizindaba izolo ukuthi bazaphenduka njalo lesidumbu eRufaro Stadium kusasa ukupha abayabe bengakavalelisi uMugabe ithuba.
NgoMgqibelo isidumbu sizahanjiswa eNational Sports Stadium lapho uMugabe azavaleliswa khona ngabakhokheli bamazwe atshiyeneyo andubana angcwatshwe ngeSonto.
Kodwa udaba lokuthi uzabekwa ngaphi lulokhe luhlupha ngoba kulokudonselana okukhulu phakathi kwabakoMugabe abathi abekwe ko Zvimba ngosiko lwabo lohulumende othi kumele uMugabe angcwatshwe eNational Heores Acre.
UNtungamili Nkomo we Studio Seven ubuze ingcwethi kwezombusazwe uMnu Dinizulu Macaphulana ukuthi ubona njani ngokudonselana lokhu.